သြဂုတ်လ 11, 2018 – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သြဂုတ်လ 11, 2018
1:2 ဘယ်လောက်ကြာ, အိုထာဝရဘုရား, ငါအော်ဟစ်ရလိမ့်မည်, သငျတို့သနာမည်မဟုတ်? အကြမ်းဖက်မှုများခံစားနေရပြီးစဉ်သင်တို့အားငါကြွေးကြော်ရကြလိမ့်မည်, သင်တို့ကိုကယ်တင်မည်မဟုတ်?
1:3 အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်နှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုထုတ်ဖော်ပြသကြပါပြီ, ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်လုယူသောဥစ္စာနှင့်မတရားမှုကြည့်ဖို့? ထိုအခါတရားသဖြင့်စီရင်ရှိခဲ့, ဒါပေမယ့်အတိုက်အခံကိုပိုမိုအစွမ်းထက်သည်.
1:4 ဒီအတွက်ကြောင့်, the law has been torn apart, and judgment does not persevere to its conclusion. For the impious prevail against the just. ဒီအတွက်ကြောင့်,aperverse judgment is issued.
1:5 Gaze among the nations, နှင့်ကြည့်ရှု. Admire, and be astounded. Forawork has been done in your days, which no one will believe when it is told.
1:6 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, I will raise up the Chaldeans,abitter and swift people, marching across the width of the earth, to possess tabernacles not their own.
1:12 Have you not existed from the beginning, Lord my God, my holy one, and so we shall not die? သခင်ဘုရားသည်, you have stationed him for judgment, and you have establish that his strength will be swept away.
1:15 He lifted up everything with his hook. He drew them in with his dragnet, and gathered them into his netting. ဒီကျော်, he will rejoice and exult.
1:16 ဒီအတွက်ကြောင့်, he will offer victims to his dragnet, and he will sacrifice to his netting. For through them, his portion has been made fat, and his meals elite.
1:17 ဒီအတွက်ကြောင့်, ထိုကွောငျ့, he expands his dragnet and will not be lenient in continually putting to death the peoples.
2:2 ထိုသခင်သည်ငါ့ဆီသို့တုန့်ပြန်ပါဟု: ထိုရူပါရုံရေးထားနှင့် tablet ပေါ်မှာရှင်းပြပါ, သူကဖတ်သူကိုသူကတဆင့် run စေခြင်းငှါဒါ.
2:3 အဖြစ်သေးဗျာဒိတ်ရူပါရုံဝေးသောသည်, ထိုသို့အဆုံး၌ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, ထိုသို့အိပ်မည်မဟုတ်. ဒါကြောင့်မည်သည့်နှောင့်နှေးဖော်ပြထားတာ အကယ်., ထိုသို့စောင့်ဆိုင်း. ထိုသို့ရောက်ရှိလာသည်နှင့်ကရောက်လာပါလိမ့်မယ်များအတွက်, ထိုသို့နှောင့်နှေးမညျမဟုတျ.
2:4 အကယ်, မယုံကြည်သောသူမူကား, သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်တော်တိုင်အတွင်းလက်ျာဘက်ဖြစ်မည်မဟုတ်; ဒါပေမယ့်သူ့ကိုမိမိယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သောသူသည်.
မဿဲ 17: 14-20
သြဂုတ်လ 12, 2018